Beyond Screen: Maitiro eBlockchain Achaita Sei Kushambadzira Kwekushambadzira | Martech Zone
Tim Timers-Lee paakagadzira iyo Webhu Yepasi Pose pamusoro pemakumi matatu emakore apfuura, haaigona kunge akafanoona kuti Internet yaizoshanduka ichive chinhu chinowanikwa kwese nhasi, zvichinyatso shandura mashandiro anoita nyika munzvimbo dzese dzehupenyu. Pamberi peInternet, vana vaishuvira kuve maastronomasi kana madhokotera, uye zita rebasa re kuchinja or musiki wezvemukati zvaisavapo. Kurumidza kusvika nhasi uye inenge 30 muzana yevana vane makore masere kusvika gumi nemaviri tariro yekuve YouTuber. Nyika dzakaparadzaniswa, handizvo here?
Zvemagariro venhau pasina mubvunzo zvakaendesa kukurudzira kushambadzira kwemeteoriki kukwira nemhando dzakatemerwa kushandisa kusvika US $ 15 bhiriyoni na2022 pane izvi zvemukati kudyidzana. Iwo musika wakangowedzera zvakapetwa kaviri kubva muna 2019, zvichiratidza kugona kwebhizimusi-emadhora ekushambadzira indasitiri. Kunyangwe iri kutsigira yakanyanya kushuvira chinhu cheumbozha kana gadget yazvino, vanokurudzira vava kuenda-kune mazhinji mabrandari anotarisa kusvika, kuita, uye kukumbira kune vavanotarisira vateereri.
Kugona Mutambo Wemari, Kuva neyako Brand
Kuzivikanwa kwekushambadzira kwekukurudzira hakuna chikonzero. Muna 2020 chete, takaona nyeredzi yeYouTube yakabhadharwa kwazvo ichiwana mari inokwana US $ 29.5 miriyoni, nevatambi vezvinhu gumi vepamusoro vachikweva mibairo inodarika US $ 10 miriyoni. Kim Kardashian, semuenzaniso, akatengesa zvinonhuwira zvake mune maminitsi mashoma mushure mamamirioni gumi nemaviri evataridzi vakaisa mukati mayo livestream, nepo TikTok vanokurudzira vakavhura zvigadzirwa uye mabhenji achikanda mukurumbira machati. Ndiyo nyaya yeA-listers kana avo vakakwanisa kupaza nzvimbo, vachitsvaga mukurumbira uye kubudirira nevateereri vavo.
Nekudaro, kune rimwe divi kurondedzero inokurudzira inowanzo regedzwa pakati pehypes uye buzz yeanhasi uye anopisa kufurira. Kune imwe, chikuva-chinopa simba rinogona kushatisa vatsva kana niche vatambi. Zvipingamupinyi zvakakwirira zveYouTube zvekuita mari zvinouya mupfungwa - kuwana mari yekushambadzira inongochengeterwa vagadziri vakatounganidza vateereri vanopfuura chiuru nepo musiki wepakati achiwana chete $ 3 kusvika $ 5 pa1,000 vhidhiyo yekuona. Mari diki yakanaka kune iyo indasitiri inobhadhara. Uyezve kune avo vari kudzvanywa nemhando - kungave kuba mifananidzo, kunyora zvibvumirano zvisiri pamutemo, kusabhadhara, kana kukurudzira vanoshandira kushandira mahara. Kubva pane zvisikwa zvemukati kusvika kune zvemukati kuurayiwa, vanokanganisa vanowanzo kutora mutoro wemushandirapamwe wese, uye vanofanirwa kupihwa mari yakakwana nebasa ravo.
Mukutsvaga kuumba hupfumi hune hunyanzvi, zvino vagadziri vezvinhu vanogona sei kuzvimiririra vachigadzira yavo vachiona kuti ivo vanozadzisa vimbiso yavo?
Blockchain inogona kunge iri imwe nzira yekuita izvi.
Imwe yekushandisa kwakadai kwe blockchain chiratidzo - maitiro ekuburitsa chiratidzo che blockchain chinogona kumiririra digitally kuve muridzi kana kutora chikamu mune chaiyo inotengeswa pfuma. Chiratidzo chakakurukurwa zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura, zvichitevera mashandisiro emakesi mumaindasitiri mazhinji anotenderera mitambo, hunyanzvi, mari, uye varaidzo. Muchokwadi, ichangobva kungoita kuratidzika kwayo pamapuratifomu enharaunda nekutanga kwe BitClout, blockchain-inofambiswa chikuva iyo inobvumidza vanhu kutenga uye kutengesa ma tokeni anomiririra kwavo kuzivikanwa.
Nenzira imwecheteyo, vagadziri vezvinhu vanogona kuwana masimba makuru, kuzvitonga, uye kuve varidzi vechiratidzo chavo nekumisikidza yavo yechiratidzo - kungave kuzvitenga ivo pachavo kana mazano avo - uye kuita mari zvirinani marita uye marangi vasingavimbe chete nekushambadzira mari kubva kune chikuva.
Inogoneswa ne blockchain, iko kushandiswa kwezvibvumirano zvehungwaru kunogona zvakare kubatsira vanokurudzira vanoona kuti kubhadhara kwakakodzera kunoitwa mushure mekunge mushandirapamwe wapera. Zvibvumirano zvehungwaru zvakanyorwa nemamiriro akafanobvumiranwa ayo anogona kuiswa neese maviri mabhenji uye vanokurudzira. Kamwe chibvumirano chasvika, mari yacho inogona kuendeswa otomatiki pasina iyo tsvuku tepi yechitatu bato inononoka kuita kwacho.
Kutyaira Kukosha Nekujeka
Sezvo nyika inoshandura magiya, saizvozvowo indasitiri yekushambadza iri kuchinja. Mabhiza anga achishandisa mabhajeti emadhizaini emamwe mafomu edhijitari ekushambadzira kuitira kuti asvike kune vateereri avo vakatamisa hupenyu hwavo zvishoma nezvishoma online. Nepo kushambadzira kwekusimudzira kungave kuri iko kuitika kwechinguvana, akawanda mabhenji haana kugara achiona kuwirirana kwakananga pakati peanokurudzira-based kushambadzira uye yepamusoro mukutengesa, zvichisiya vashambadziri vasina chokwadi nezvekurudziro yevagadziri vezvinhu izvi.
Izvi zvinonyanya kudaro kana dambudziko re 'vateveri vehunyengeri' razara munzvimbo zhinji dzemagariro mapuratifomu. Tora semuenzaniso anopesvedzera nemazana ezviuru evateveri. Asi, kubatanidzwa kwemaposi avo kwakadzikira, kusingarohwe katatu manhamba. Izvo zvinowanzoitika muzviitiko zvakadai ndezvekuti anokurudzira atenga vateveri vavo. Mushure mezvose, nemasaiti senge Social Envy uye DIYLikes.com, zvese zvinotora hapana chimwe kunze kwekadhi kiredhiti nhamba kutenga iyo uto remabhoti pane chero media media chikuva. Uye nemidziyo mizhinji yemagariro enhau yakagadzirirwa kuteedzera budiriro chete zvichibva pamametric senge vateveri kuverenga, iyi 'kubiridzira' inogona kuenda isingawanikwe nemhando. Izvi zvinogona kusiya mabrands achishamisika, asina chokwadi chekuti nei zvaitaridzika semushandirapamwe wekukurudzira wakaguma wakundikana.
Iyo ramangwana revanokurudzira ROI inogona kugadzirwa ne blockchain, netekinoroji inokwanisa kupa pachena pachena kune zvigadzirwa zvinotarisa kuratidza vanokurudzira uye kusimbisa kudzoka kwavo kune mari. Saizvozvowo sevanyengeri vanoratidzira zvirimo, zvigadzirwa zvinogona kuratidza kwavo kutengeserana nevakagadzira zvemukati. Semuenzaniso, mabrand anokwanisa kuona kuti manhamba akakosha eanokurudzira, ruzivo nezve mukurumbira wavo zvichibva mukuita kwakapfuura, uye huwandu hunofungidzirwa hwekudyidzana hwakavharirwa muzvibvumirano zvakabvumiranwa mushandirapamwe usati waitwa, kuitira shanduko yakajeka uye yakachengeteka inovimbisa zvimwe kubudirira mushandirapamwe mhedzisiro. Pamusoro pezvo, mukubvisa vapindiri vasina basa, blockchain inogona kutobatsira kudzikisira mari yepakati nepakati uye kudzikisira mitengo yekushambadzira mune hupfumi uko kuderedzwa kwemabhajeti kuri kuwedzera.
Mugwagwa Pakati Penyika dzeVafudzi neVagadziri
Munyika yedhijitari inotongwa neruzivo rwenhema, vanokurudzira vanokurumidza kuwana tsoka yakasimba kana zvasvika pakuva izwi rine mvumo kungave kusimudzira yavo yavanofarira brand kana kutaura pamusoro penyaya iri padyo nemoyo wavo. Iko kusvika uye kukanganisa kwevanopesvedzera pane veruzhinji hakugone kusiiwa, ne 41 muzana yevatengi inotaura kuti vanokurudzira vanofanirwa kushandisa mapuratifomu avo zvakanaka. Zvakare, makumi mashanu neshanu muzana evashambadziri vanonzwa kuti vachange vakangwarira kushanda pamwe nevanokurudzira avo vanotaura nezvenyaya dzezvematongerwo enyika nezvematongerwo enyika. Makakatanwa aya ari pakati pevanyengeri uye vanokanganisa zvinoreva kuti pane chikonzero chevanokurudzira kuti varatidze kuenzanisa pakati pekuzvidzora kuchengetedza zita rechiratidzo uye kupindura munharaunda yavo uye neruzhinji rwevanhu.
Asi zvakadaro, zvakadiniko kana munhu anokurudzira akasarudza kutaura kunze kwechikonzero chavanotenda kupokana nemitemo yechiratidzo? Kana kuti zvakadii kana munhu anoshanda achida kubatana zvirinani uye nekuumba hukama hwepedyo nemuteveri wake? Apa ndipo panogona kuuya blockchain yakasarudzika network kuti ivharise nyika dzevateveri nevakagadziri, ichibvisa munhu wepakati - uya wemapuratifomu kana zvigadzirwa - uye kudiwa kwekuwandisa zvemukati zvemukati. Na blockchain, vanogadzira zvemukati havangowana chete kuzvitonga kwavo vega zvinhu asi ivo zvakare vanowana mukana kunharaunda yavo, zvichikonzera kubatana kukuru nevateveri. Semuenzaniso, vane yavo yechiratidzo chiratidzo pa blockchain, vanokurudzira vanogona kuzokwanisa kupa mubayiro uye nekukurudzira vateveri vavo zvakananga. Saizvozvowo, nharaunda yeva fan inogona zvakare kuve nechavo mumhando yezvinyorwa zvavanoda kuona, zvichiwedzera kukurudzira yakadzika chikamu chekubatana pakati pemusiki ne fan.
Pasina vagadziri, mapuratifomu haana simba, uye zvigadzirwa zvinogona kuramba zviri mumumvuri. Mukufungidzira hupfumi hwesimba kune vese vanogadzira zvemukati uye zvigadzirwa, panofanirwa kuve nezviyero zvakakura zvesimba uye blockchain inogona kubata kiyi kune yakajeka simba rekushambadzira ramangwana - iro riri pachena, rakazvimirira, uye rinopa mubayiro.
Tags: blockchainCreatorsFanskuchinjakushambadzira kushambadzirakuita marikuita marichiratidzochiratidzozviratidzo